महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या र बच्ने उपाय – Janamanch.com
नेपाली महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुमध्ये पाठेघर झर्ने (खस्ने) ‘जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ’ एक मुख्य समस्या हो । अहिले पनि ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय महिलाहरुले यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिने गरेको पाइदैन् । बरु उनीहरुले बच्चा भएपछि हुने स्वभाविक असरका रुपमा लिने गरेको पाईन्छ । सामान्य चेतना भएतापनि लाज मनेर लुकाइरहेका हुन्छन् । अर्कातर्फ प्रजनन् अंग र यसको कामको बारेमा हाम्रो परिवार समाजमा निकै न्यून मात्रामा छलफल गरिन्छ । किनकी यस्ता कुरा परिवारको ठूला साना सदस्यसंग गर्दा लाज र इज्जत जाने कुरा सम्झिने गरिन्छ । यसले गर्दा कतिपय महिलाहरु मानसिक, शारीरिक रुपमा सहित श्रीमानबाट समेत पिडीत हुन बाध्य छन् ।
के हो पाठेघर खस्ने समस्या ?
पाठेघर झर्नु (खस्नु) भनेको महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छाडेर योनीबाट बाहिर आउनु वा शरीरभित्रै आफ्नो ठाउँ छाडेर तल खस्नु हो । यो समस्या मुख्यतयाः पहिलो बच्चा पाएको महिला तथा धेरै बच्चा पाएका पहिला जोसुकैलाई हुन सक्छ । यसलाई गाँउठाउँ अनुसार पाठेघर झर्ने (खस्ने) वा आङ खस्नु भनिन्छ ।
महिलाको पाठेघर झर्नु (खस्नु) को मुख्य कारण उनको गर्भाशयलाई बाँधेर राख्ने नशाहरु कमजोर भएर त्यससंग जोडिएका अंगहरु विस्तारै तल खस्नाले हुन्छ । पाठेघर झर्नुका मुख्य कारणहरु निम्न छन् । कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले र गर्भान्तर नगरी बर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भनेर बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, सुत्केरी अवस्थामा टुक्रुक्क बसेर लुगा धुने वा गह्रौँ कामहरु गर्नाले, गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा धेरै हिड्ने, गह्रौँ भारी उचाल्ने बोक्ने गर्नाले र चुरोट खाएर बारम्बार खोकी रहनाले पाठेघर खस्नुका कारण हो ।
पाठेघर झर्दा देखिने लक्षणहरु
पाठेघर झरेपछि पर्ने समस्या
शारीरिक र स्वास्थ्य समस्याः
ढाड र कम्मर दुख्ने, हिड्दा, बस्दा, खोक्दा अप्ठ्यारो लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, टुक्रुक्क बसेर काम गर्दा अप्ठ्यारो हुने र पाठेघर बाहिरै आएको छभने घाउ भएर अन्तमा क्यान्सर पनि हुन सक्छ ।
यौन सम्पर्क गर्दा अफ्ठयारो हुन सक्छ । जसले गर्दा श्रीमानसंगको सम्बन्ध चिसो भएर झगडा हुने र बिस्तारै बिछोड र श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याउने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ । सधैको शरीरिक समस्याबाट मानसिक तवरले पनि विछिप्त हुन सक्छ । सेतो गन्हाउने पानी आउने हुनाले समूहमा संगै बस्ने मान्छेलाई गन्हाउने डरले समूहमा नबस्ने बसे पनि एक्लै बस्ने र एक्लो महशुस हुन सक्छ ।
पाठेघर खस्ने समस्याको विशेषगरी तीन विधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ । –व्यायामः महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्राप्त महिलाहरुले सिकाएको ब्यायम गर्न सक्छन् । जसलाई ‘किगेल्स ब्यायम’ भनिन्छ । यो ब्यायाम घरमै गर्न सकिन्छ । पाठेघर अलिकति मात्र तल खसेको भए मात्र यो व्यायामले काम गर्छ । –रिङ पेसरीः खसेको पाठेघरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने उपायलाई रिङ पेसरी भनिन्छ । यो विधिमा योनीमा रिङ पेसरी राख्ने गरिन्छ । योनीबाट रिङ पेसरी राखेर झरेको पाठेघरलाई भित्रै अड्काउने गरिन्छ । पाठेघरमा राखेको रिङ हरेक तीन महिनामा फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
–शल्यक्रियाः महिलाको पाठेघर योनीबाट बाहिरै निस्केको भएमा शल्याक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । शल्याक्रियाबाट कसैको पाठेघर पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ भने कसैमा अवस्था हेरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पाठेघर समस्याबाट कसरी बच्ने ?
धरै बच्चा जन्माउनु हुँदैन, कम्तिमा दुईदेखि चार वर्षको अन्तरमा मात्र बच्चा जन्माउनुपर्छ । २० वर्षभन्दा अगाडि बच्चा जन्माउनु हुँदैन । गर्भवती महिलाले गरुङ्गो भारी अथवा सामान उठाउँनु हुँदैन । सुत्केरी महिलाले पटुका धेरै कस्नु हुँदैन । पौष्टिक र भिटामिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । बच्चाको उमेर अन्तरका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । पाठेघर सम्बन्धी समस्या भएमा चिकित्सकको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ । किशोरीहरुलाई पोषिलो खाना खुवाउनु पर्छ । महिलाको उमेर कम्तिमा २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा कम्तिमा चारपटक र सुत्केरी अवस्थामा तीन पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा गई दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट प्रसुति गराउनुपर्छ । गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो खाना पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ । गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार गर्नुपर्छ । सुत्केरी भएको कम्तिमा ६ हप्तासम्म आराम गर्नुपर्छ । सुत्केरी अवस्थामा गहृौ भारी नबोक्ने । दोस्रो गर्भको चाहना भए परिवार नियोजनको साधन अपनाई कम्तिमा २ वर्ष पर्खने ।
लुगा च्यातिएपछि सिलाउनु पर्छ, ‘लुज’ भयो या ठूलो भयोभने घटाउनुपर्छ । पाठेघर खसेको उपचार पनि यस्तै हो । कुपोषित छभने मासुको तन्तुहरू बलियो हुँदैन, त्यसो हुँदा पोषणयुक्त खायो भने केही राम्रो हुन्छ । गर्भवती हुँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बच्चालाई स्तनपान गराइरहनुपर्छ, त्यसकारण पोषण दूधमा गएर महिलाको आफ्नो शरीरमा पोषणको कमी हुन्छ । त्यसैले पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । सुत्केरी हुँदा रगत बगेको हुन्छ, त्यसको पूर्तिको लागि पनि प्रशस्त पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ ।